हामीले आर्जन गरेका ज्ञान र सीपलाई मुलुकको समृद्धिका लागि प्रयोग गरौँ: डा. उपेन्द्र महतो  BRTNepal
हामीले आर्जन गरेका ज्ञान र सीपलाई मुलुकको समृद्धिका लागि प्रयोग गरौँ: डा. उपेन्द्र महतो
बिआरटीनेपाल २०७५ असोज २५ गते ७:३२ मा प्रकाशित
साढे एक दशक पहिलेसम्म विदेशमा बस्ने हामी नेपालीहरू नेपाल र नेपालका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा अलग अलग बसी चिन्तन–मनन गथ्र्याैं । तर, त्यस्ता कुनै पनि प्रयत्न गैरआवासीय नेपालीहरूलाई जोड्ने कडी हुन सकेनन् । त्यसैले एउटा सामूहिक या संस्थागत अभियानको आवश्यकता खट्किरह्यो ।
विदेशमा बसेर हामी जे जस्तो पौरख गरिरहेका छौँ या दुःख पाइरहेका छौँ । अब पनि देशलाई अगाडि बढाइएन या समृद्ध बनाइएन भने हामी मात्र होइन, हाम्रा सन्तान–दरसन्तानले सन्ततिले सधैँभरि दुःख पाइरहने भए । त्यही भावनालाई कसरी सही र मूर्त रूप दिने भनेर एक खाले छटपटी भइरह्यो ।
देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजाने संयुक्त प्रयास के हुन सक्छ त ? हामीले मस्कोमा बसेर गहन छलफल ग-यौ । र, विभिन्न देशमा बसिरहेका साथीहरूसँगको भलाकुसारी र सरसल्लाहपछि मनको अन्तरकुन्तरमा एउटै कुरा भेटियो– एउटा संस्था या एउटा अभियान जरुरी छ । त्यही महसुस गरेर सन् २००३ को अक्टोबरमा गैरआवासीय नेपालीहरूको पहिलो सम्मेलन भयो, नेपालमा ।
अक्टोबर छानिनुको कारण के हो भने विदेशमा बस्ने नेपाली लामो समय घर फर्किएका हुन्नन् । ‘फेस्टिभ मुड’ मा परिवारसँग बसेर दसैँ, तिहार मनाउने चाहना जो कोहीलाई हुन्छ । चाडबाडमा सबैलाई नेपाल जान मन लाग्ने र फर्किने सिजन पनि भएकाले अक्टोबर जति सुहाउँदो महिना अरू के हुन सक्थ्यो ?
गैरआवासीय नेपालीको मर्म, उद्देश्य अनि सही रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएका कामबारे नेपाल सरकारसँगै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी जानकार छन् । उनीहरूले के महसुस गरिसकेका छन् भने एनआरएनए वास्तवमै पवित्र सामाजिक संस्था हो ।
नेपालीको हित अनि नेपालको समृद्धि र विकासका लागि केही गरौँ भन्ने एक मात्र भावनाले नै यो संस्था अगाडि बढेको छ । र, गैरआवासीय नेपालीले केही गर्न खोजेका छन्, केही गर्न सक्षम छन् र अति नै इमानदारी र संवेदनशीलताका साथ त्यसमा अगाडि बढिसकेका छन् भनेर नै नेपाल सरकारले ११ अक्टोबरलाई गैरआवासीय नेपाली दिवस मनाउने निर्णय ग-यो । यो गैरआवासीय नेपालीका लागि गौरवशाली दिन हो । र, ठुलो जिम्मेवारीको दिन पनि हो । यसले प्रत्येक गैरआवासीय नेपाली मित्रहरूको जिम्मेवारी बढाइदिएको छ । यसमा तपाईँहरूको साथ सदैव आवश्यक छ ।
हामीले संसारभर नै गैरआवासीय नेपाली दिवस मनाउँदै आएका छौँ । गैरआवासीय नेपाली दिवस ‘फेस्टिभल’ का रूपमा मात्र होइन, मातृभूमिप्रतिको माया, जिम्मेवारीका साथै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्ने ‘प्लेटफर्म’ पनि भएको छ ।
एनआरएनएमा लामो समयसम्म (पुँजी) मात्रै बहसको विषय बन्थ्यो । तर, नेपालको पछौटेपनमा पैसाको मात्र अभाव हो जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले आर्जन गरेका अथाह ज्ञान र सीपलाई अब मुलुकको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नु जरुरी छ । त्यसैले ज्ञान, सीप तथा प्रविधिबारे बहस सुरु गरौँ भनेर यसपालि नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौँ, विज्ञ सम्मेलन ।
अहिले संसारमा दुईवटा कुराको अति नै महत्त्व छ, एउटा पैसा र अर्को इनोभेटिभ आइडिया । गैरआवासीय नेपालीहरू अहिले संसारका ठूल्ठूला इन्स्टिच्युट, मल्टिनेसनल कम्पनी र विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन् । तिनीहरू विज्ञान र कृषिमा निकै अगाडि बढिसकेका छन् । तिनले नयाँ इनोभेसनलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर मुलुकलाई प्रशस्त योगदान गर्न सक्छन् ।
तिनको ज्ञान, सीप, अनुभवको लगानीलाई पैसासँग मात्र दाँजेर हेर्न मिल्दैन । त्यो ज्ञान, सीप र अनुभवको आधारमा हामीले केही कुरा दिन सक्यौँ भने नेपाललाई धेरै ठुलो फाइदा हुन सक्छ । र, नेपालमा यसको ठुलो भविष्य छ भनेर नेपाली मित्र, गैरआवासीय मित्र र विदेशी मित्रहरू लगानी गर्न अगाडि बढ्नेछन् । विज्ञ सम्मेलनको महान् उद्देश्य यही हो ।
विभिन्न देशमा काम गरिरहेका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता साथै विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ठुला विज्ञहरूका लागि एउटा ‘प्लेटफर्म’ हुनेछ, विज्ञ सम्मेलन । नेपालमा कुन कुरा छिटो सिक्न सकिन्छ ? कुन कुरा छिटो उत्पादन गर्न सकिन्छ र नेपालको माटो, हावापानी, यहाँको संस्कृति, आवश्यकता र बजार सुहाउँदो छ ? सम्मेलनमा हामीले विदेशमा पढेका, सिकेका, कमाएका र व्यावहारिक अनुभवका आधारमा विज्ञहरूबिच छलफल चलाउने जमर्को गरेका हौँ ।
पक्कै पनि वृहत् छलफलपश्चात् नयाँ कुरा, नयाँ आविष्कार र नयाँ क्षेत्रका कुरा पाइनेछ । विस्तृत अध्ययनका रूपमा आउने निश्चित कार्ययोजनालाई हामी नेपाल सरकार, नेपालमा भएका विभिन्न सङ्घसंस्था र नेपाली लगानीकर्तालाई दिने छौँ । यो अभियानमा गैरआवासीय नेपाली मित्रहरूलाई पनि आह्वान गर्नेर्छौं । त्यसले आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन सोच पैदा गरी अगाडि बढाउन सघाउ पुग्नेछ साथै नेपालको समृद्धिमा ठुलो भूमिका खेल्नेछ ।
एनआरएनए ७९ वटाभन्दा बढी देशमा नेश्नल च्याप्टर रहेको एउटा ठुलो संस्था भइसकेको छ । पहिला विदेशमा बस्ने नेपालीहरू नेपालमा सुरक्षा छैन, भ्रष्टाचार बढी भयो, नेपाल गरिब भयो भनेर मात्र कुरा काटिरहेका हुन्थे । तर, पछिल्लो समय केही गैरआवासीय नेपालीमा मैले नेपालका लागि के गरेको छु त ? नेपालमा गरिबी छ, अशिक्षा छ र मैले बाहिर बसेर कुरा मात्र गर्नुभन्दा नेपालमा सुधारका लागि के गरेको छु त भन्ने गहन भावना समेत जागृत भएको छ । त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो ।
साँच्चै राष्ट्रले मलाई के दियो भनेर मात्रै होइन, मैले चाहिँ के दिएको छु त भनेर सोच्ने बेला आएको छ । किनकि हिजोका दिनमा हामीसँग प्रशस्तै बहाना बाजी थिए, मुलुकको परिवेशलाई लिएर, अस्थिरतालाई लिएर । तर, आज फेरि त्यस्तै कुरा दोहो-याइरहनु गलत हो । लामो संक्रमणकालको अन्त्यपछि मूलकमा एउटा सहज वातावरण बनेको छ । सम्भावना देखिएको छ । त्यही सम्भावनाको आडमा हामी मुलुकको भविष्य निर्माणमा योगदान गर्न सक्छौँ ।
बुझ्नै पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने, यस्तो ठुलो संस्थालाई भावनाका रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक र वैधानिक रूपमा अघि बढाउनु समेत जरुरी छ ।
एनआरएनए नेपालको सांसदबाट विशेष कानुन पारित भएर दर्ता भएको संस्था हो । नेपाल सरकारले हामीलाई कति ठुलो इज्जत दिएको छ, गैरआवासीय नेपालीलाई कति मद्दत गरेको छ र उनीहरूबाट नेपालले कति ठुलो आशा राखेको छ भन्ने दर्साउन यति नै पर्याप्त छ ।
जग जाहेर छ– एनआरएनए ठुलो सङ्ख्यामा सदस्य भएको सामाजिक संस्था हो । हाम्रो विधान विभिन्न देशमा भएका नेश्नल च्याप्टर र केन्द्रसँग समन्वय गरी कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित छ । यसलाई व्यावहारिक एवं वैधानिक रूपमा कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्नेमा हामी दत्तचित्त छौँ । त्यसैले परिवर्तित परिवेशमा धेरै देशमा भएको समितिलाई सबल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि हामी एनआरएनएको विधान संशोधन पनि गर्दै छौँ ।
हाम्रो संस्थाका कार्यकारिणी समितिका नेतृत्वमा रहेका साथीहरू जो छन्, उनीहरू आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन् । फुर्सदको बेला सामाजिक सङ्घसंस्थामा पनि समय दिनुपर्ने भएकाले यी सबैलाई सन्तुलन गरेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अहिले हाम्रो विधानमा के–के थप्नुपर्छ, के–के कुरा हटाउनुपर्ने छ र यसलाई प्राविधिक रूपमा पनि सरल र सहज रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिनेछ ।
निश्चय पनि प्रत्येक दुई वर्षमा हुने सङ्घको महाधिवेशनमा विभिन्न देशबाट आएका राष्ट्रिय च्याप्टरका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने र नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यानमा विस्तृत छलफल गर्न हामीसँग समय पर्याप्त हुँदैन ।विधान आन्तरिक कुरा हो । त्यस कारण बन्द सत्रमा नै यसको छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनमा समयको अभाव भएकै कारणले नै अहिले विद्या नलाई छलफल गर्न विशेष विद्यान सभाको व्यवस्था गरिएको हो ।
कुनै पनि देशको संविधान भनौँ या कुनै संस्थाको विधान अपरिवर्तनीय हुन सक्दैन । समय, आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसैले एनआरएनएको विधान पनि त्यही अनुसार संशोधन भइरहन्छ । विगतमा सिकेका ज्ञान र भोगेका अनुभवका आधारमा सही र विस्तृत रूपमा छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ ।
यसपालि हामीले नेपालको विकासको बाटोमा, नेपालको समृद्धिको अभियानमा र नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई आत्मसात् गरेर विभिन्न देशमा भव्यताका साथ गैरआवासीय नेपाली दिवस मनाउँदै छौँ ।
हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ– व्यक्तिगत सफलता जुनसुकै उचाइमा पुगे पनि देश समृद्ध भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले त हामी ‘नेपालीहरूका लागि नेपालीहरूद्वारा’ भन्ने नारा लिएर अगाडि बढेका हौँ ।
म दोहो-याउन चाहन्छु– अनुसन्धानका साथै विभिन्न विधाका विज्ञ गैरआवासीय नेपाली मित्रहरूको सहभागितामा नेपालमा पहिलोपल्ट विज्ञ सम्मेलन हुन लागेको छ । विज्ञ सम्मेलनमा मैले, हामीले नेपालका लागि के गर्नुपर्छ, के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा छलफल हुन्छन् ।
गैरआवासीय नेपाली, नेपाल सरकार प्रतिनिधि, नेपालका विज्ञ, सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिनिनिधिको छलफलपछि व्यावहारिक रूपमा नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन हामीले के कसो गर्न सक्छौँ ? त्यसमा अगाडि बढ्नका लागि म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा, सम्पूर्ण साथीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली दिवससहित आउन लागेका चाडबाड दसैँ, तिहार, छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु । प्रत्येक नेपाली सुखी, स्वस्थ र समृद्ध होऊन् भनी भगवान्सँग प्रार्थना समेत गर्न चाहन्छु ।
(एनआरएन ग्लोबलको विषेशांकबाट सम्पादित अंश)
प्रधानमन्त्री ओली केबुलकारमा १ घण्टा अलपत्र
नेपाल र युएईबीच शून्य लागतमा नेपाली कामदार लिने सम्झौता
चीनको कुनमिङमा ट्रेड एक्स्पो सुरु, नेपालका १२१ स्टल
नेपालमा लगानी गर्न फ्रान्सका व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
नेपाल र फ्रान्सबीच आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा आपसी सहमति
मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयद्वारा अस्वीकार
नेपालले युएई र मरिसससँग श्रम समझदारी गर्दै, नेपाली कामदारले उपदान पाउने